Isilinganiso Sesimo Somzimba Ezimbuzini Zobisi
Isimo somzimba singumlinganiselo sokugcinwe imzimba esilwaneni. Isimo somzimba wesilwane sibonisa inani lemithombo ye-fat kanye namaprotheni (imisipha) etholakala ukugcinwa, ukukhulelwa nokukhiqizwa. 'Isimo somzimba womzimba' (i-BCS) iyithuluzi elibalulekile labalimi ukukhulisa ukukhiqizwa, ukudla kanye nenhlalakahle yezilwane zabo.
I-Body Condition Scoring (BCS) ikhumbula izici eziyingqayizivele ezimpilweni zobisi ezifana nesiteji se-lactation kanye nama-lactation aphakanyisiwe, izinga lokukhiqiza, isigaba sokuthi isibeletho sizalana nokuzalana, iminyaka yobudala bokuqhathaniswa nesakhiwo somzimba.
Imbuzi iyi-feeder ekhethiwe futhi ayigcini i-fibre kanye nezinkomo nezimvu. Ngakho-ke, izimbuzi zobisi azikwazi ukugcina isimo somzimba emadlelweni angavunyelwe yedwa. Badinga amandla engeziwe kanye namaprotheni, mhlawumbe ngokugxila kanye / noma izinhlamvu zomzimba.
Imbuzi ye-Saanen yobisi e-U.S. ikhiqiza ngaphezu kwesisindo se-5% sesisindo somzimba wakhe ebisi ngosuku, ngaphezu kwe-30ct day (10 months) lactation. Ngaphezu kwalokho, angakwazi ukukhiqiza izingane ezinhlanu kuya ngonyaka. Lelizinga lokukhiqiza lidinga izinga elifanele lokudla.
Isisindo sezimbuzi sishintsha phakathi nomjikelezo wokuzalanisa nokwehla. Izilwane ezikhiqizayo eziphezulu zizolahlekelwa yisimo somzimba ngemuva kokubamba futhi ngesikhathi sokudla okuphakeme, ngakho-ke ukondla kumele kulungiswe ukuze kutholakale isidingo sokudla okunomsoco. Izinguquko zesisindo kufanele zinciphise ngokuhlela uhlelo lokudla kahle. Lapho udoti oluphakeme, imbuzi idonsela emanzini ayo futhi iyancipha.Ukuveza ubisi ebeleni ekupheleni kwesikhathi kudingeka abeke isisindo godu ngakho unezinqolobane ezanele zokukhulelwa nokukhulelwa okulandelayo.
Akuyona efiselekayo ngoba kulahlekelwa isimo somzimba ngenkathi eyomile.
Abaphathi bezimbuzi zobisi bavame ukukhetha i-freshen (isikhathi sokuthomba okokuqala) abanye baneminyaka engu-12 ubudala ngenkathi bephethe emuva ngokuthi "bangamantombazane abomile" futhi bawahlanza ezinyangeni ezingu-18 noma ezingu-24. Lezi zinqumo ezihlukene zidinga izinhlelo ezihlukene zokondla futhi zenze i-BCS ehluke kakhulu.
Amantombazane asezinyosi athole izinyanga ezingu-7 kuya kwezingu-9 ubudala futhi aqhubeke ekhula kakhulu ngenkathi ekhulelwe. Bavame ukuba nama-BCS aphansi kakhulu ekuqhathaneni futhi cishe akunakwenzeka ukondla ngokweqile ukondla unyaka. Ingabe lokho kuphelile ezinyangeni ezingu-18 kuya kwezingu-24 kuzovame ukukhombisa i-BCS ephakeme futhi kufanele iphathwe ukunciphisa isimo esiphezulu ngaphambi kokubamba.
Ezinye izici (ngaphandle kokudla) zingase zithinte isimo somzimba ezimbuzi zezimbuzi. Lezi zihlanganisa ama-parasites, ukuchitha izifo, isifo segciwane noma igciwane kanye nezinkinga zamazinyo.
Isimo somzimba esibekwe amakhanda ebisi ubhekene nalokho okwezinkomo zobisi. Izimbuzi zilondoloza okuningi kwamafutha azo emathunjini. Ngakho-ke uhlelo lwesimo somzimba olubekwe amagoli olwakhiwe luhlanganisa izilinganiso zamafutha e-brisket kanye nesilinganiso samanqamu amafutha esifundeni se-lumbar.